एशियामा साढे २ लाख पाइलट चाहिन्छः बोइङ् | गृहपृष्ठ
Home अन्तरराष्ट्रिय एशियामा साढे २ लाख पाइलट चाहिन्छः बोइङ्
on: August 28, 2018 अन्तरराष्ट्रिय
एशियामा साढे २ लाख पाइलट चाहिन्छः बोइङ्
भदौ १२, इलिनोइस (अमेरिका) । तपाईलाई रोजगारी चाहिएको छ ? कतै तपाईले पाइलट तालीम लिनेबारे सोच्दै हुनुहुन्छ कि ? त्यसो भए तपाईले भविष्यमा एशियामै राम्रो जागिर पाउन सक्नु हुन्छ । यो भनाई अमेरिकी विमान निर्माता संस्था बोइङ्को हो । बोइङ्का अनुसार आगामी २ दशकभित्र एशियालाई लाखौं पाइलट, प्राविधिज्ञ र क्याबिन क्रु आवश्यक पर्नेछ ।
एशिया क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदरमा हुने वृद्धिसँगै आम मानिसको सम्पत्ति बढ्ने क्रममा छ । योसँगै हवाई यात्राको माग पनि बढ्नेछ । फलतः सन् २०३७ सम्ममा यस क्षेत्रमा हवाई सेवाको विस्तारसँगै २ लाख ४० हजारभन्दा बढी पाइलटको खाँचो हुनेछ । सो अवधिसम्म ३ लाख १७ हजार क्याबिन क्रुको आवश्यकता पर्ने बोइङ्को भनाइ छ । यी मध्ये आधा रोजगारी चीनमा सृजना हुनेछ ।
एकातिर पाइलटकै तालीम लिएपनि स्तरीय तालीमको अभावमा काम पाउन सकिरहेका छैनन् । यस्तेमा विमान सेवा उद्योगले अहिले नै भने जस्तो पाइलट पाउन सकिरहेका छैन । बोइङ्को पछिल्लो प्रक्षेपणले विमान उद्योगमाथि दबाब थप बढाउने निश्चित प्रायः छ । बुढा भइसकेका पाइलटहरु आगामी दशकमै सेवा निवृत्त हुने क्रममा छन् । हेलिकप्टर पर्यटन र निजी लक्जरी जेट् जस्ता व्यावसायिक प्रयोजनका हवाई यात्राको माग बढिरहेको छ ।
बोइङ्का अनुसार सो अवधिसम्म चीनलाई मात्रै १ लाख २८ हजार पाइलट चाहिन्छ । दक्षिण पूर्वी एशिया र दक्षिण एशियालाई भने क्रमशः ४८ हजार ५ सय र ४२ हजार ७ सय ५० पाइलट चाहिन्छ । बोइङ्ले भविष्यमा कति थान विमान आवश्यक होला भन्ने प्रक्षेपण निकाल्न विमान सेवा उद्योगमा आवश्यक कर्मचारीको अनुमान गर्ने गरेको छ । उसका अनुसार नयाँ विमानको मागमा एशिया–प्रशान्त क्षेत्र विश्वै सबैभन्दा अगाडि रहनेछ । आउँदा वर्षमा डेलिभर हुने कुल मध्ये ४० प्रतिशत विमान एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा रहेको विमान कम्पनीलाई डेलिभर हुने बोइङ्को प्रक्षेपण छ ।
भावी मागलाई दृष्टिगत गरेर बोइङ्ले पाइलट विकास कार्यक्रमलाई पनि तीव्रता दिएको छ । तर यस उद्योगको बढ्दो मागलाई पूरा गर्न कम्पनीको प्रयास मात्रै पर्याप्त भने छैन । ‘यस क्षेत्रमा पाइलटको सृदृढ माग निरन्तर रहनेछ, र यस प्रवृत्ति आगामी कयौं वर्षसम्म जारी रहने हाम्रो अपेक्षा छ,’ बोइङ् ग्लोबल सर्भिसेजका ट्रेनिङ एण्ड प्रोफेशनल सर्भिसेजका उपाध्यक्ष केइथ कूपरले भने । पाइलटको अभावले वायु सेवा उद्योगको वृद्धि नै जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी विश्लेषकहरुले पनि दिएका छन् । पाइलटको अभावले एकातिर प्लेन उपयोगबिहिन अवस्थामा बस्नेछन् र थोरै कर्मचारीलाई धेरै तलब दिएर टिकाउनु पर्दा कम्पनीहरुको मुनाफा पनि घट्ने अवस्था आउनेछ । एजेन्सी